Laamaha Moderaterna oo badidood taageero u muujiyey Ulf Kristersson - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laamaha Moderaterna oo badidood taageero u muujiyey Ulf Kristersson
La daabacay måndag 11 september 2017 kl 09.53
Sharraxaaddii hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna oo maanta ku eg
Af-hayeenka dhaqaalaha xisbiga Moderaterna Ulf Kristersson. sawir: Anders Wiklund/TT
Laamo badan ee ka tir-san xisbiga Moderaterna ayaa ku dhawaaqay iney taageer-san yihiin musharax-nimada Ulf Kristersson ee hoggaanka xisbiga.
Laamaha ayuu ka mid yahay laanta xisbiga ee gobolka Skåne. Iyadoona uu Ulf Kristersson taageero aqlabiyad leh ku heysto badankood laamaha xisbiga ee gobollada.
–Waxaan aamin-sanahay inuu Ulf si wanaag-san u soo ban-dhigi karo siyaasadda xisbiga Moderaterna. Ulf Kristersson wuxuu si habsami leh u baahin karaa su’aalaha kala duwan ee siyaasadda xisbiga Moderaterna, isagoona hab wanaag-san oo la fahmi karo uga doodi kara dhinacyada kala duwan ee caqabadaha bulshada hor-yaala. Jawaab ayaannu u heynaa, isaguna waa siyaasi sharraxaad ka bixin kara jawaabahaa, sida ay sheegtay Linda Allanson Wester, ku xigeenka hoggaamiyaha laanta xisbiga ee gobolka Skåne.
Dhammaan laamaha gobollada ee codkooda dhiibtay iyo cidda ey la jeclaan lahaayeen hoggaanka xisbiga laba maahine ayey sheegeen iney taageer-san yihiin Ulf Kristersson, una muuqda inuu qaban doono jagada hoggaanka xisbiga Moderaterna.
Labada laan-gobol ee aan codkooda siin Ulf Kristersson ee laanta Bariga Götaland iyo Gävleborg oo kaalintooda koowaad ee codka siiyey hoggaamiyihii hore ee xisbiga Moderaterna Carl Bildt.
–Waxaa muuqata in laanta xisbiga ee Gävleborg ey xubnaheeda badankood kalsooni ka ballaaran u hayaan Carl Bildt iyo inuu yahay siyaasiga sida ugu fudud guul u soo hoyin kara. Wuxuu horay u ahaa hoggaamiyaha xisbiga, iyo waayo-arag-nimo ballaaran, muddo ka soo shaqeeyay xisbiga aadna loo yaqaanno, sida uu sheegay guddoomiyaha laan-goboleedka xisbiga ee Gävleborg Patrik Stenvard.
Stenvard ayaa sidoo kale sheegay inuu Ulf Kristersson kaalinta labaad kaga leeyahay kalsoonida xubnaha xisbiga ee laanta Gävleborg. Linda Allanson Wester ayaa aamin-san inay tahay saansaan wanaag-san taageerada ballaaran ee loo hayo Ulf Kristersson.
–Waxay iila muuqataa mid wanaag-san inaan muujinno in taageero ballaaran loo hayo Ulf Kristersson.